Global Voices teny Malagasy » Firenena vaovao ao Pasifika? Nifidy ny fahaleovantena miala amin’i Papoà Ginea Vaovao i Bougainville · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Desambra 2019 5:23 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Oseania, Papua Nouvelle Guinee, Ady & Fifandirana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Maherin'ny 180.000 ireo Bougainvilliana nandray anjara  tamin'ny referandaoma nanomboka ny 23 Novambra hatramin'ny 7 Desambra ary nifidy maro dia maro ho amin'ny fahaleovantena izy ireo fa tsy ny fizakantena bebe kokoa avy amin'i Papoà Ginea Vaovao.
Nipoaka  tao Bougainville tamin'ny taona 1988 ny ady an-trano noho ny fiantraika ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana nateraky ny toby fitrandrahana Panguna ampiasain'ny orinasa Aostraliana ao amin'ny nosy. Nisy ny fitroarana mikasika ny fomba fitantanana ny toby tsy mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka ao an-toerana. Nanaparitaka tafika ny governemantan'ny tanibe Papoà Ginea Vaovao ka niteraka ady nitam-pidiana izany. Naharitra efa-taona ny krizy ary voalaza fa aina an'arivony no nafoy mandra-pisan'ny fifanarahana fandriampahalemana nosoniavina tamin'ny taona 2001 izay nitarika ny fananganana ny Governemanta Mizakatenan'i Bougainville. Nahitana fiantohana hanatontosa referandaoma  ihany koa ny fifanarahana mba hamaritana raha maniry fahaleovantena na fizakantena avy amin'i Papoà Ginea Vaovao ny Bougainvilliana.
Fahaleovantena  ho an'ny vahoakan'i #Bougainville  izany. 176.928 ireo nifidy ho an'ny #Safidyfaha2  raha 3.043 kosa no nandatsa-bato ho amin'n'ny Fizakantena bebe kokoa [#GreaterAutonomy ] avy amin'i #PNG .
Ao #Bouganville , mitondra ny vata fandatsaha-bato amin'ny fomba nentim-paharazana ny renim-pianakaviana. Milaza izy ireo fa mikarakara tsara ny hoavin'ny zanany izy ireo. “Omeo anay izay tadiavinay” Arahin'ny polisy sy ny hiaka nentim-paharazana..singsing Kaur pairap lo arawa lo bik sun … (Teny sy Sary avy amin'i June Magasu)
Hotontosaina in-telo miatoana mandritra ny 8 ora ny fanisam-bato ary antenaina hivoaka amin'ny Talata herinandro ho avy farafahatarany ny vokatra. Ny filohan'ny Referandaoma Bertie Ahern no hamoaka ny fanambarana ofisialy. #BougainvilleReferendum  #PeaceByPeacefulMeans  @ForumSEC  @PACNEWS1  pic.twitter.com/9LrCul8xW5 
Saingy nisy ihany koa ireo Bougainvilliana izay nahatsapa fa tokony ho hirika hiresahana ireo olana lehibe hafa mahakasika  ny dingana ho amin'ny fandriampahalemana tahaka ny fitakiana fanonerana ho an'ireo niharam-boina tamin'ny ady ny referandaoma. Misy ny vondrona  Facebook antsoina hoe ‘Feon'i Bougainville Mangina’ izay mampahatsiahy ny manampahefana momba ny tokony hanajana ny zon'olombelona sy hiheverana ny antson'ireo niharam-boina “mangina” tamin'ny ady. Henny Kuijpers, mpikambana ao amin'ny vondrona niresaka  tamin'ny anaran'ireo fianakaviana mitady ny rariny noho ny fijaliana niaretan'izy ireo nandritra ny ady:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/18/145835/
 nandray anjara: http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=13915302575dd9bb85dce4469f0890
 Namoaka : http://bougainville-referendum.org/statement-from-the-commission/